Isakhelo sefoto yedijithali, isipho esiqhelekileyo seKrisimesi | Iindaba zeGajethi
Isakhelo sefoto yedijithali, isipho esiqhelekileyo seKrisimesi
Olu hlobo lweemveliso lwalune-boom ebalulekileyo kangangexesha elithile, ifreyimu yefoto yedijithali yaqala ukuduma ngakumbi ngexesha elinye apho iikhamera zedijithali zazithengiswa ngakumbi nangakumbi. Nangona kunjalo, Iikhamera zedijithali zalahleka umphunga wazo kudala, Ngoku sonke sithwala umgangatho ofakwe kwifowuni yethu ephathekayo.
Isandla sokuwa kweekhamera zedijithali zafumana ubunzima kwifoto yedijithali. Nangona kunjalo, ukwanda kweenkqubo zokusebenza kunye nokuncitshiswa kweendleko kunike umoya obalulekileyo kolu hlobo lwesixhobo.
Le femu izinikezele ekuthengiseni inani elifanelekileyo leemveliso kwiAmazon egxile ekufotweni, ezinje ngoobhaka nazo zonke iintlobo zamagumbi eekhamera ezinkulu, iilensi, iifilitha, izibane ezibonisa ukukhanya nokunye okuninzi. Ke, ifoto elungileyo ikwafanele ukuvezwa ngeyona fomathi inokwenzeka, yiyo loo nto eyenzekayo ngesakhelo sefoto yedijithali onokuyithenga isuka kwi- € 69,99 ithengiswa ngale linki yama-AmazonThatha ithuba lesibonelelo kuba iyabhabha kwaye sisipho esikhulu.
1 Izixhobo kunye noyilo: Incinci into yokuchasa kunye nomngcipheko
2 Phantse ujongano olupheleleyo kunye nokuhambelana
3 Iimpawu ezaneleyo zobugcisa
Izixhobo kunye noyilo: Incinci into yokuchasa kunye nomngcipheko
Ngaphandle kwamathandabuzo, uBeschoi akafuni ukubeka emngciphekweni ubuncinci kule mveliso, sifumana isakhelo esisezantsi esenziwe ngeplastiki emnyama yePVC (ubuncinci iyunithi yethu) ngescreen esimalunga nee-intshi ze-10,1 ngee-bezels ezichaziweyo onokuzilindela kuloo mveliso. Ngokukodwa, isakhelo esisezantsi yeyona nto ingqindilili, kuba inesenzi sentshukumo kuyo, kunye nesenzi sokuqaqamba esinikezela ngezona ziphumo zibalaseleyo ngawo onke amaxesha, kwaye ngaphezulu kwayo yonke into ndicinga ukungachithi ixesha xa kungekho mntu Ujonge.
Emuva sineenotshi ezaneleyo ngeenjongo zokwenza ukuba zihambelane nenani elifanelekileyo lenkxaso, sinokhetho lokuncamathisela naluphi na uhlobo lwenkxaso yendalo iphela sisebenzisa izikrufu. Lo ngasemva kulapho amazibuko oxhulumaniso abekwe khona, kunye neqhosha lolawuloKufuneka iqatshelwe ukuba ayibambeki, into enokuthi ixatyiswe ithathela ingqalelo ukuba sisakhelo sefoto kwaye ayisisixhobo esisebenzisanayo kuphela, ngale nto ndiyathetha ukuba ukuyenza ibe lula kuya kwenza ukuba kube nzima xa kuziwa ekuboniseni umxholo ngaphandle kweminwe. kuthetha, phakathi.
Phantse ujongano olupheleleyo kunye nokuhambelana
Njengoko uBeschoi ebhengeza, sijamelene nesixhobo esisebenzisa uhlobo lwakudala kunye nolwenziwo lwe-Android, ke ukuhambelana kuyasebenza ngokupheleleyo. Sifumana ithuba lokufaka amakhadi e-SD, i-SDHC kunye neMMC, kunye nasiphi na isixhobo se-USB, Ngale ndlela isixhobo siya kufikelela kumxholo. Ukuhamba ujongano olulula kakhulu, kufuneka sicinezele amaqhosha amane kwicala ngasemva, sikhatshwa liqhosha elibiza imenyu kunye nelinye ngo- "Kulungile" ukuqinisekisa iintshukumo esizicelayo.
Kufuneka kuqatshelwe ukuba sine-remote control, i-remote iyakusivumela ukuba senze ngokugqibeleleyo yonke into esiyichaze apha ngasentla kodwa ngokukhululeka okukhulu, kuba inenani elikhulu lamaqhosha kunye nokusebenza, oku kuya kukuxabisa kwaye okuninzi xa ubeka isakhelo somzekelo eludongeni, apho bekungayi kujongeka njengokujonga ubungakanani bescreen sakho. Olu nxibelelaniso luya kusivumela ukuba sibambe ngumfanekiso ukuthanda kwethu, ukudlala umculo okanye ukudlala ividiyo, kunye nokukhetha ii-screensavers ezahlukeneyo ezisinika ithuba, umzekelo, ukufaka ikhalenda kunye newashi. Kunye neefoto zethu esizithandayo okanye iividiyo, kuba ewe, sineevidiyo ukuba sinqwenela.
Iimpawu ezaneleyo zobugcisa
Siya kwinani, sifumana u-a I-10,1 intshi kufutshane nesikrini se-HD, kwisisombululo se-pixel esingu-1024 x 600, yanele ukufota ubungakanani bayo, kodwa asinakho ukucela iinkcukacha ezinkulu nokuba. Kwelinye icala, une-panoramic factor ratio ye-16: 9, ke ungcono ulibale malunga neefoto ezithe nkqo, ukongeza ekubeni ungathandeki nakubani na, bazala kakubi kakhulu kule freyimu yedijithali. Njengoko besesitshilo, sinokonwabela iividiyo ngezigqibo ukuya kuthi ga kwi-720p okanye i-1080p engathandwayo. Yipaneli ye-IPS LCD kwithiyoriNangona uluhlu lwayo lokubonakala lungqongqo, bekuphantse kwaba nzima kum ukukholelwa ukuba yi-IPS hayi i-VA, nangona kunjalo, ilawulwa kakuhle ngokwemiqathango yokwahluka kunye nokuthembeka kombala.
Sinento yokuhamba eshukumayo efumana ukuya kuthi ga kwiimitha ezi-3 kude kunye nokuma kwendlela emileyo yokuma. Ewe asinalo naluphi na uhlobo lonxibelelwano olungasebenzisi cingo olunje ngeBluetooth okanye iWiFi. Ndikhumbula ubuncinci iBluetooth njengendlela yokuhambisa iifoto ukuze ndingacimi indawo yokugcina idatha eya kuthi iqhagamshele kwisixhobo ngokusisigxina. Ngokwenxalenye yayo, ukusebenza kuza neshaja esemgangathweni ye-5V edibanisa kwinethiwekhi, bakhethe iplagi ye-AC yakudala, ndiyamangaliswa kukuba bengabandakanyi izibuko le-microUSB.
Akuthandabuzeki eyona imbi siyifumene Kule isakhelo sefoto yedijithali yinyani yokuba ayinalo unxibelelwano, into endifumanisa kunzima ukuyikholelwa xa kuthathelwa ingqalelo ixabiso leetafile zeAmazon ze-HD, ngokuthe kratya. Nangona kunjalo, ngexabiso eliqinileyo kunokuba yinto egqithisileyo.
Ngenxalenye yalo eyona ifreyim Kukuba kulula ukumisela, ukukhawuleza ukusebenza kunye neeplagi kunye nokudlala okungathintelwanga. Yenza into ekufuneka iyenzile ukusukela kumzuzu wokuqala, nangona ngokucacileyo umgangatho wezithethi zestereo okanye ipaneli ye-IPS inokuphuculwa ngokucacileyo, sifumana imveliso ezinzileyo kwinqanaba lexabiso lomgangatho.
Ungayithenga le mveliso kwii-euro ezingama-69,99 kwiAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Reviews » Isakhelo sefoto yedijithali, isipho esiqhelekileyo seKrisimesi
I-adventure yekhadi lokuthengisa lomntwana elitshabalalayo ngoku liyafumaneka kwi-iOS nakwi-Android
Ngokufika kobandayo, iimodeli ezintsha zeiglavu ezivela kwinkampani kaMujjo ziyavela